Hampandroso ny firenena ao anatin’ny firaisan-kina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
I Madagasikara dia firenena iray voahodidin’ny ranomasina, tsy ahitana fifandonana mitam-basy na fitaovam-piadiana, tsy nisy vondron-tafika mpioko mifanandrina amin’ny tafi-panjakana toy ny miseho any amin’ny firenen-kafa tahaka ny any Afrika : Soudan – Nigeria – Centrafrique
Iray tsy mivaky ny firenena Malagasy, araka ny Lalàm-panorenana. Ny fahazoana ny fahaleovantena dia tsy nidika fa voahaja ny fiandrianan’ny firenena, satria ny fandaminana ara-toekarena napetraky ny firenen-dehibe dia ny fanjanahana ny firenena ankolaka, hiankin-doha tanteraka amin’ny fanampiana sy fiahiana ara-bola mandrak’androany. Tsy afaka misaraka amin’izany ny tontolo politika izay ahitana hatrany ny dian-tanan’ireo firenena vahiny: Frantsa, Etazonia, Rosia, Sina.
Ankehitriny, misafotofoto ny toe-draharaha amin’ny lafiny rehetra (toe-karena, sosialy, politika), vokatry ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 maneran-tany sy ny fepetra noraisin’ny firenena tsirairay. Eto amintsika dia mitotongana ny sandam-bola, midangana ny vidim-piainana, mihena ny fahefa-mividin’ny Malagasy, mitombo ny fahasahiranana, mihamaro ny mahantra sy ny tsy an’asa, maro koa ny fitokonana sendikaly sy ny fitakiana tsy nahitam-baliny. Mikororosy ny firenena, mihamahantra ny vahoaka malagasy amin’ny ankapobeny. Maika araka izany ny drafitra hanarenana ny toe-karena sy fandaminana anatiny ny savorovoro.
Eo anatrehan’izany, amin’ny fotoana tsy ampoizina dia mety ho sarotra ny hifehezana ny toe-draharaha ary ny vokany ara-toekarena dia tsy hay vinavinaina fa handentika lalina kokoa ny toerana misy antsika ankehitriny. Manana ny soatoavina mampiavaka azy ny firenena Malagasy ary tsy mendrika ny fandaminana teren’ny avy any ivelany intsony (Feuille de route, Accord,…).
Manoloana izany dia manao antso avo ny GEN mba hatsahatra ny fihetsika sy fitenenana feno fihantsiana avy amin’ny mpanao politika, avoaka hanan-kery ny sata mifehy ny antoko mpanohitra sy ny lehiben’ny mpanohitra, havaozina ny lalàna mandrafitra ny Komity ho Fampihavanam-pirenena (CFM) ka hahitana ny raiamandreny ara-panahy sy ny raiamandreny manana fahendrena Malagasy, tsy mpisehatra ara-politika nefa mahafantatra tsara ny tantaran’i Madagasikara ary tena ho mpampihavana. Atomboka ny fandinihana ny lalàna mifehy ny fifidianana ary hakana ny hevitry ny hery ara-politika sy ny firaisamonim-pirenena.
Ho dinihina manokana amin’izany ny paikady handrafetana ny lisitry ny mpifidy, ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana (pré-campagne), ny fanamboarana ny “carte d’électeur biométrique”. Ireo rehetra ireo dia mitaky fotoana herintaona sy tapany na roa taona.
Hanokafana ny haino aman-jerim-panjakana ho an’ny mpisehatra tsy hisy hanavahana mba hisian’ny adi-hevitra hampandrosoana ny ara-toe-karena sy ny ara-tsosialin’ny firenena.
Izany rehetra izany anefa dia atao ao anatin’ny fanajana ny “déontologie” sy ny “ethique” amin’ny fanehoan-kevitra.
Ny adihevitra dia tsy hifanipaka amin’ny lalàm-panorenana izay lalàna fototra.
Ny hevitra tsy mitovy no fanoitra handrafetana ny fampandrosoana satria isika rehetra dia samy tompon’i Madagasikara.
Ny fanehoan-kevitra dia hatao ao anatin’ny fifanajana hitandrovana ny fihavanana sy ny firaisam-pirenena.
Ny tanjona dia tokana: “Hampandroso ny firenena ao anatin’ny firaisankina”.
Efa toe-javatra miverina eto amintsika foana izao zava-misy ankehitriny izao, tsy miova ny fihetsiky ny mpitondra fa ny olona no niova, tsy miova ihany koa ny fihetsiky ny mpanohitra fa ny olona ihany koa no niova, efa lasitra misy angamba? Tsy maka lesona ve isika? Tombontsoan’ny Firenena marina ve no katsahina. Raha ny hafatry ny Ntaolo aloha dia izay be no basy ary ny firaisan-kina no hery. Isika ihany no antony mampandrosoa antsika na mampahantra antsika fa aza mijery antony hafa na lany andro mifanilika.